QM oo shaacisay kordhinta la dagaalanka Ayaxa – Radio Daljir
Luulyo 10, 2021 8:12 b 0
Hay’adda Cunnada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee (FAO) ayaa sheegtay inay kordhisay howlgallada cirka ah ee lagu xakameynayo Ayax farabadan oo ku nool meelo kamid ah waqooyiga Soomaaliya.
Warbixinteedii ugu dambeysay ee ay soo saartay, ayay hay’adda cunnada ee Qaramada Midoobay ku sheegtay in ayan jirin ayax lagu arkay intii lagu guda jiray sahamin ay ka sameeyeen gobolka waqooyi-bari ee degaannada Puntland.
“Hawlaha ugu badan ee howlgallada dhinaca Hawada ah ayaa socda si uusan ugu faafin Ayaxa yar yar ee haray ee ku soo duulay xeebta waqooyiga-galbeed ee (Somaliland),” ayay tiri FAO.
Waxay sheegtay in waxtarka sahaminta iyo hawlgallada xakamaynta ee hadda ka socda waqooyiga Soomaaliya iyo bariga Itoobiya ay saamayn ku yeelan doonto baaxadda Ayaxa kusii qul qulaya waqooyi-bari Itoobiya.
Sida laga soo xigtay UN-ka, Ayaxu waa cayayaanka ugu da’da weyn uguna halaagga badan adduunka.
Soomaaliya waxaa ay kamid tahay dalalka sanad kasta uu saameynta xoogan ku yeesho Ayaxa, waxaana uu baabi’iyaa dalagyo farabadan oo ku beernaa Beer ku yaal Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.